ပန်ဒိုရာ: WAY BACK INTO LOVE
ပျော်ရွှင်စရာ သီချင်းလေးတွေနဲ့ ဘ၀မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တခါလောက် နေကြည့်ပါလား။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆီ အတူတကွ ပြန်သွားကြပါစို့။
DJ ယောဆရာ ကို အားကျလို့ DJ ပန် လုပ်လိုက်တယ်။ အဟဲ။
တကယ်တော့ ဒီသီချင်းလေးကို သဘောကျနေတာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးလလောက် ကတည်းကပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Music and Lyrics ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလေးထဲကပါ။ Alex Fletcher အဖြစ် Hugh Grant နဲ့ Sophie Fisher အဖြစ် Drew Barrymore က သရုပ်ဆောင်ထားတယ်။ အဲဒီရုပ်ရှင်မှာ သဘောကျတဲ့ စကားပြောလေးတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဒီလို..
သီချင်းကို မြန်မာလိုပါ လိုက်ဆိုလို့ရအောင်လို့ စာလုံးထည့်ကြည့်မိတယ်။ ဒီတော့ ဘာသာပြန်တာက အတိအကျ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ (ကိုယ်ညံ့တာကို ကြို ကာ ထားတာ။) ကော်ပီ ကော်ပီနဲ့ နာမည်သာဆိုးတာ စကားလုံးဆရာတွေရဲ့ အလုပ်ကလည်း မလွယ်ဘူးပဲ။ တော်တော် ခေါင်းစားတယ်။ ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်မှသိတယ်။ ဆိုကြည့်နော်.. စကားလုံး ထောက်သေးရင်လည်း မှတ်ချက်မှာ အကြံပြုသွားပါဦး။ ခေါင်းစဉ်ကိုလည်း ဘယ်လိုပြန်ရမလဲ ချန်ထားခဲ့တယ်။
အိပ်ရာထက်မှာဖုံးအုပ် .. မိုးသား..တိမ်တွေ…နဲ့
အတိတ်တို့က အကျဉ်းချလို့ ရုန်း..မထွက်..နိုင်ခဲ့..
အိပ်မက်တွေဝေးကွာ ကိုယ့်မျှော် လင့်..ချက်.တွေ..လည်း.. ကွယ်ဝှက်
အချိန်လေးများ ဘေးကို ခဏ.သိမ်း..ထား
စိတ်ထောင့်ကလေးရှင်းလို့ ကိုယ် ကွက်…လပ်..ချန်.ထား
လိုချင်တာက လိုက်လို့ရှာဖွေ အချစ် ပြန်တွေ့..မယ့်. လမ်း
ပြန်ရှာနေတဲ့ အချစ်ကို မတွေ့ပဲ ဘယ်ရပ်..တည်..နိုင်ပါ့မလဲ
အို အို အိုးးး
စောင့်နေတုန်းပဲ ကိုယ့်ကို အလင်း.မပေး.ချင်.တဲ့..ကြယ်တွေ
အရိပ်အရောင်လေးတောင် မတွေ့တော့ မောပေါ့ လိုက်..ရှာခဲ့
တနေရာမှာတစုံတရာတော့ ရှိမယ် ကိုယ့်ဝိညာဉ်အတွက်
လိုက်ရှာခဲ့တာ အလင်းရောင် ထွန်းပေးနိုင်မယ့် သူတစ်ယောက်
ကိုယ့်ကို ညတွေ ဖြတ်ကျော် ပေးဖို့ အတွက် မကဘူး
လိုတာ သူ ညွှန် လမ်းပြပေး
ဒါဆို အကြံဥာဏ်ပေးမလား ကိုယ်..ဖွင့်..ထား
လိုချင်တာက လိုက်လို့ရှာဖွေ အချစ် ပြန်တွေ့မယ့် လမ်း
တကယ်လို့များ နှလုံးသားလေး ပြန်ဖွင့်ခဲ့ရင်
ကိုယ်ထင်တယ် မင်းလေးတနေ့တော့ရောက်မယ် ကိုယ်..မျှော်နေမိသေး
အစစ်အမှန် လားလို့ မခွဲတတ် ဆွတ်ပျံ့အချိန်..လေး..များ
ကိုယ့်လိုပဲလေ ထပ်တူ တယောက်ယောက် ခံစား..သလား
လိုချင်တာက လိုက်လို့ရှာဖွေ အချစ် ပြန်တွေ့..မယ့် လမ်း
ပြန်ရှာနေတဲ့ အချစ် မှမပါရင် ဘယ်ရပ်..တည်..နိုင်ပါ့မလဲ
နောက်ဆုံးတော့ ရှိနေမယ် ကိုယ်အမြဲတမ်း မင်းအတွက်ပဲ
ပန်ဒိုရာ အခုဘာသာပြန်လိုက်တာကို ၀င်းမင်းထွေ၊ သုခမိန်လှိုင်၊ ကေအေတီ တို့ မျက်ခုံးလှုပ်နေလောက်ပြီ။
မပန်ရေ မင်္ဂလာပါ။ ဒီသီချင်းလေးကို ဖိုးကာနဲ့ရှင်ဖုန်း ဆိုလိုက်ရင် တော်တော်goodလောက်တယ်ဗျ။
ဒီကား ကြည့်ဖူးတာ ကြာပီ။ ဇာတ်က ဆွဲခေါ်တာ ခံလိုက်ရတယ်။ နောက်ဆုံး သူတို့ သီချင်းလေးကို စင်ပေါ်မှာ အလှည့်မကျခင် မင်းသား တစ်ယောက်တည်း ဆိုတဲ့ သီချင်းကလည်း ထိတာပဲ။ ကောင်းပါ့.. ဂွတ်ထ။
i wonder how they will think of classical music without any lyrics.
November 30, 2007 at 4:03 AM
Let's dance with Dj pan...
ပီတိရေ မမြှောက်ပါနဲ့ ကွယ်.။ ဒီက မြောက်ချင်နေတာ
ကိုအောင်သူ.. ဘယ်သူဆိုဆိုပါ ဆိုရင် ကော်ပီရေးခတော့ ပေးရမှာ.. ဟဲဟဲ
နောင်တော် . ဟုတ်တယ် အဲဒီ သီချင်းလည်းကောင်းတယ်
လင်းလင်း ၀င်္ကပါ လေးမ အားပေးကြတာ ကျေးဇူးပါ
ပန်ဒိုရာ သေတ္တာထဲမှာ ဘာရှိသလဲ
ကောင်းကင်အစစ်မှာ စီးဆင်းချင်တဲ့ ဖြူနီမြစ်တစ်စင်း